Qaboojiyaha Daaqada Cusub ee Shiinaha 12V 24V Ultrathin Model Truck Parking Air Conditioners soo -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha | Hollysen
Hawo -dhigashada baarkinka, waddooyinka taageera, baabuurta waaweyn, mashiinnada dhismaha. Waxay xallin kartaa dhibaatada baabuurka xamuulka iyo mishiinada dhismaha marka baabuurka iyo carsaanku meel dhigto. Si aad u isticmaasho DC12V/24V/36V korontada ku jirta korontada waa sahayda qaboojiyaha baabuurka. Iyadoo aan lagu qalabayn qalabka koronto -dhaliyaha; Nidaamka qaboojiyaha wuxuu adeegsadaa qaboojiyaha nabdoon iyo bay'ada u fiican waa R134A, si hawo-qaboojiyaha baarkinku uu u noqdo mid tamar-badbaadin iyo hawo-qaboojiye koronto u fiican deegaanka. Marka la barbardhigo qaboojiyeyaasha caadiga ah ee dul saaran hawo-qaboojiyaha, qaboojiyaha hawo dhigashada uma baahna inay ku tiirsanaadaan awoodda mishiinka baabuurka, kaas oo badbaadin kara shidaalka oo yarayn kara wasakhaynta deegaanka.
Sida laga soo xigtay cilmi -baarista iyo jawaab -celinta suuqa, rakibidda hawo -qaboojinta baarkinka ayaa noqotay isbeddel, ma aha oo kaliya badbaadinta shidaalka iyo lacagta, laakiin sidoo kale eber wasakhaynta iyo eber qiiqa. Sidoo kale waa hoos u dhaca isticmaalka tamarta. Qaybta qaboojiyaha dhigashada ee lagu rakibay saqafka baabuurka, kombaresarada, ku -beddelaha kuleylka iyo albaabka ka -bixidda oo la isku daray, gaar ahaan is -dhexgalka sare, guud ahaan qurux badan, keydinta booska rakibidda, waa naqshadda ugu bisil.
Mugga hawada Evaporative
Mugga hawo qaboojinta
Muhiimadda dhigashada hawo qaboojinta:
1. Waxay dabooli kartaa baahiyaha qaboojinta ee qolka wadista si aasaasi ah;
2. Buuq yar, ku dhawaad ​​ma saameyn doono inta kale ee gaadiidleyda;
3. Marka la eego, qiimaha adeegsiga matoorku wuu ka hooseeyaa shididda qaboojiyaha.
Astaamaha mashiinka oo dhan-ka-sarreeya
1. Marna uma baahna in aad feeriso, iyada oo aan waxyeello u geysan jirka baabuurka;
2. Hawada kulul ayaa kacda oo hawo qabow ayaa dhacda, dabacsan oo raaxo leh;
3. Iyadoo aan la xiriirin tuubo, qaboojiyaha si degdeg ah.
Hore: 12V Auto A / C Compressor Manufacture Factory ee Subaru Impreza / Subaru Stella / Subaru Impreza XV
Xiga: Qaboojiyaha Hurdada Baabuurka ee Universal 12v 24v Qaboojiyaha Hawada Korantada ee Korontada
Qaboojiyaha Baabuurka Universal Xamuulka 12v 24v El ...